အလှည့်ကျရင် – Grab Love Story
နောက်တနေ့ မနက်မှာ နိုးနေပေမယ့် အိပ်ရာထဲက သူ မထွက်ချင်လို့ ဆက်အိပ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်း လာလို့ ကုတင်ဘေး ကပ်ရက် စားပွဲပေါ်က ဖုန်းကို လှမ်းကောက်ကိုင်လိုက်တယ် ။ “ ထင်အောင်ကျော်လားဟင် …” “ ဟုတ်ကဲ့…မမ ” ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ..ခေါ်တာ ….။ “ ထင်အောင်ကျော် ရေ..နိုးပြီလား..စောစောစီးစီး ခေါ်ရတာတော့ အားနာတယ်ကွယ်…ဒါပေမယ့် ရွှေနန်း အိမ်က တယောက်ထဲ ထွက်သွားလို့..မမတို့ စိတ်ပူနေကြတယ် …ထင်အောင်ကျော် လိုက်ရှာပေးပါအုံးကွယ်….ဒီကောင်မလေး ညလဲ မအိပ်ဘူး..ငိုလိုက်တာလည်း အရမ်းဘဲ…” “ ဟုတ်ကဲ့မမ..ကျနော် အခုဘဲ လိုက်ရှာပါမယ် …” “ သူ ဘာဖြစ်တာလဲ..ရီးစားနဲ့ ကွဲတာလား….” “ ဟုတ်ပါတယ်..မမ…အဲဒီ သဘောပေါ့…” “ အေး..မင်းက သူ ဘယ်တွေ သွားနိုင်သလဲ ပိုသိမယ်..လူလိုရင် ကားလိုရင် ဖုန်းဆက်လိုက်နော်…” “ ဟုတ်ကဲ့…မမ….ရွှေနန်းက ကား နဲ့ ထွက်သွားတာလား…” “ ဟုတ်တယ်…သရီးတူးသရီး နဲ့ ထွက်သွားတာ….” “ ကျနော် အမြန်ဆုံး လိုက်ရှာမယ်..မမ…စိတ်ချပါ….” “ အေးအေး..ထူးခြားရင်…တွေ့ရင် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပါကွယ် …” “ ဟုတ်ကဲ့ ..မမ…” အိပ်ရာက ချက်ချင်းထ..မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ရေချိုးလိုက်ရတယ် ။ ရွှေရေးဆီ သွားချော့မယ့် အစီအစဉ် ပျက်သွားပြီ ။ ရွှေနန်းကို လိုက်ရှာဖို့ သူ့ကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က တာဝန်ပေးလိုက်ပြီ မဟုတ်လား…။ အိမ်က မထွက်ခင် “ ရွှေရေး ” ကို ဖုန်းထပ် ခေါ်ကြည့်သေးသည် ။ ရွှေရေး မကိုင်ဘူး ။ အရင်ဆုံး ရွှေနန်း ချိန်းတွေ့နေကျ “ ကိုထက် ” တို့ ခြံကို သူ လိုက်သွားကြည့်လိုက်သည် ။ ရွှေနန်း ရဲ့ အရိပ်အရောင်ကို မတွေ့ဘူး ။ ကိုထက်ကို ခေါ်မေးလိုက်တော့လည်း ကိုထက်က ရွှေနန်း မလာ ဘူးလို့ ပြောတယ် ။ ရွှေနန်း နဲ့ တွဲတာများတဲ့ ဒေလီယာဝင်းထွန်း ကို သတိရလိုက်သည် ။ ဒေလီယာဝင်းထွန်း အိမ်ကို သူ ရောက်သွားသည် ။ ဒေလီယာဝင်းထွန်းက ရွှေနန်းဘုံ သူ့ဆီကို ရေက်မလာဘူး လို့ ပြောသည် .။ သူ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပေးမယ်ဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာဘဲ ဖုန်းနဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်တွေကို ဆက်ပေးသည် ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ရွှေနန်း အလုံလမ်းက သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ပါတီမှာ ရောက်နေတယ် လို့ သတင်းပေးတယ် ။ သူ လိပ်စာမေးပြီး ချက်ချင်းဘဲ လိုက်သွားလိုက်တယ် ။ ခြံဝင်းကျယ်ကြီး ထဲမှာ ကားတွေ တော်တော်များများ ရပ်ထားတာ တွေ့ရတယ် ။
ခြံစောင့်က တံခါး ဖွင့်မပေးလို့ သူ ဘာကောင်လဲ ဆိုတကို နဲနဲ မာမာ ပြောလိုက်တော့ ပြာပြာသလဲ တံခါးဖွင့်ပေးတယ် ။ တိုက်ကြီးထဲကို ၀င်ဖို့လည်း ခြံပေါက်ဝကလိုဘဲ တံခါးစောင့်ကို ခပ်မာမာ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်မှ ၀င်ခွင့် ရတယ် ။ အထဲမှာ မှောင်နေတယ် ။ တံခါးပေါက်တွေ..ပြူတင်းပေါက်တွေကို ကန့်လန့်ကာတွေ ချထားတယ် ။ ဆူဆူညံညံ ၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း သီချင်းသံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ ကောင်လေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်နဲ့ ခုန်ပေါက်ပြီး ကနေကြတယ် ။ အမှောင်ထဲမှာ ခုန်ပေါက်ကနေတဲ့ လူငယ်တွေထဲ ရွှေနန်း ပါမလား သေသေချာချာ လိုက်ကြည့်တယ် ။ မတွေ့ဘူး..။ စားသောက်စရာတွေ ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာတော့ မီးလင်းနေတယ် ။ အဲဒီအခန်းထဲ ၀င်လိုက်တော့ စားနေတဲ့ ကောင်လေး..ကောင်မလေးတွေကို တွေ့ရတယ် ။ “ ရွှေနန်းဘုံ သိလား…” ကောင်လေးတွေကတော့ သူ့ကို မသိသလို မထေမဲ့မြင်ပုံစံတွေနဲ့ တဖက်ကို လှည့်နေကြပေမယ့် ကောင်မလေး တယောက်ကတော့ “ သိတယ်..” လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။ “ သူ ဘယ်မှာလဲ…” လို့ ထပ်မေး တော့ ဘေးက ကောင်လေးတယောက်က “ ဖြေမနေနဲ့..ဘာဘဲကြီးလဲ မသိဘူး…” လို့ တားလိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက ဖြေပါတယ် ။ “ အပေါ်ဆုံးထပ် တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရှိတယ် …” လို့ ဖြေတယ် ။ တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကို ဘယ်လိုသွားရသလဲတော့ သူ ထပ်မမေးတော့ပါဘူး..။ သူ့ဖါသာ ရအောင် ရှာတယ် ။ အပေါ်ဆုံးတပ်ကို ရောက်တော့ ရွှေနန်းကို ခုံရည်တလုံးပေါ်မှာ ခွေခွေလေး အိပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ သူ့ဘေးမှာက ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ သရုပ်ပျက် ၀တ်စားထားတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ရှိနေတယ် ။ “ ရွှေနန်း …ဘာဖြစ်လဲ….” ကောင်လေးကို မေးလိုက်တော့ “ အရက်မူးသွားတာပေါ့…” လို့ ဖြေတယ် ။ သူရွှေရေးကို နှိုးကြည့်တယ် ..။ ရွှေရေး သတိရှိပေမယ့် အင်းအဲနဲ့ တော်တော့်ကို မူးနေတယ် ။ သူ့ကို တွေ့တော့..“ ရွှေနန်း ပြန်ချင်တယ်…” လို့ ပြောတယ် ..။ သူ ရွှေနန်းကို မထူတယ် ..။ တွဲဖက်ပြီး အောက်ကို ဆင်း..ကားပေါ်တင်တယ် ။ ကားပေါ်မှာလည်း ရွှေနန်း မျက်လုံး မဖွင့်နိုင်ဘဲ ခွေနေတယ် ။
အရက်နံ့တွေ နံဟောင်နေတယ် ။ ပါးစပ်က “ အိမ်ကို တော့ မပြန်ဘူး…ကိုထင်အောင်ကျော့်အိမ်ကို မောင်း….” လို့ ပြောတယ် ။ ရွှေနန်း ဘာပြောပြော သူ ရွှေနန်းကို သူတို့အိမ်ကို ပြန်ခေါ်သွားဖို့ လုပ်တယ် ။ ရွှေနန်းတို့အိမ်ဖက်ကို ဦးတည်ပြီး မောင်းလိုက်တယ် ။ ရွှေနန်း. မျက်လုံးပွင့်လာပြီး….“ ရေသောက်ချင်တယ်…..ရေပေးပါ….” လို့ ပြောတယ် …။ ပေးစရာ ရေကလည်း မရှိဘူး..။ ရောက်နေတဲ့ နေရာ အနီးအနားကို ကြည့်တော့ ဘဖက်ရည်ဆိုင်လေး တဆိုင် တွေ့တယ် ။ ကားထိုးရပ်ပြီး ဆင်းကြည့်တယ် ။ ရေတော့ မရဘူး..။ စပတ်ကလင် ရ တာနဲ့ ရွှေနန်းကို တိုက်တယ် ။ ရွှေနန်းပုံက တော်တော့်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဘဲ ။ ၀တ်ထားတဲ့ ထမိန် ကလည်း ပြေကျွတ်လို့ ..။ “ ကိုထင်အောင်ကျော်..အကိုက ဘာအချိုးချိုးတာလဲ….” လို့ သူ့ကို မေးလို့ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရွှေနန်း…” လို့ သူပြန်မေးလိုက်တယ် ..။ “ အိမ်မပြန်ချင်ပါဘူး လို့ ပြောတဲ့ဟာကို အိမ်နား ရောက်နေပြီလေ….” လို့ ပြောလိုက်လို့ ရွှေနန်း သတိတော့ ရှိသား..။ဘယ်နားရောက်နေလဲ ဆိုတာ သိနေတယ် …လမ်းကိုမှတ်မိနေတယ်….ဒါဆို ရင်တော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး…လို့ စိတ်ထဲ မှတ်ချက်ချမိတယ် ။ “ ကားပြန်လှည့်…အကို့အခန်းကို သွားမယ် …” ရွှေနန်းက မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။ “ အိုကေ..အိုကေ….ပြန်လှည့်မယ်….” ရွှေနန်း အမိန့်အတိုင်း သူ ရွှေနန်းကို သူ့တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်ပါတယ် ။ တိုက်ခန်းကို ရောက်တော့ ရွှေနန်း အိပ်ပျော်နေတယ် ။ လူတွေ မြင်ခဲ့ရင်တော့ သူ့ကို တမျိုးထင်ကြမှာဘဲ ။ မတတ်နိုင်ဘူး..။ ရွှေနန်းကို ရောက်ပြီ…တိုက်ခန်းပေါ် တက်ကြ၇အောင်..လို့ ပြောရတယ် ။ နှိုးရတယ် ..။ ရွှေနန်းဘုံ နိုးလာတယ် ။ “ ရွှေနန်း ဒီလိုပုံနဲ့ အိမ် မပြန်ချင်ဘူးလေ ..ဒါကြောင့် ကိုထင်အောင်ကျော်ရဲ့ တိုက်ခန်းမှာ ခဏ နေချင်လို့…ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား…” လို့ မေးပါတယ် ။ အရက်အမူးလွန်လို့ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပေမယ့် ရွှေနန်းဘုံဟာ တအားလှနေဆဲပါဘဲလို့ သူ့စိတ်ထဲက မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ။ တိုက်ခန်းပေါ်ကို ရွှေနန်းဘုံ သူ့ပုခုံးကိုမှီ..သူ့လက်မောင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်လို့ တက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘေးတိုက်ခန်းတွေကတော့ သူနဲ့ ရွှေနန်းဘုံတို့ကို ရီးစား စုံတွဲတွေလို့ ထင်ကြမှာပါ ။ တိုက်ခန်းထဲကို ရောက်ကြတော့ ရွှေနန်းကို ဧည့်ခန်းလေးက ဆိုဖါထိုင်ခုံတွေမှာ ထိုင်ခိုင်းပါတယ် ။ သံပုရာသီး တွေ ရှိနေတာ သတိရပြီး သံပုရာရေချဉ်ချဉ်လေးတခွက် ရွှေနန်းအတွက် သူဖျော်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရွှေနန်းက မျက်လုံး မှိတ်ပြီး အိပ်နေလို့ နှိုးရတယ် ။ ရွှေနန်းက ရှုံ့မဲ့ပြီး သံပုရာရေကို ယူ သောက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့“ ရွှေနန်း..ရေချိုးချင်တယ်…ရေချိုးလို့ ရမလားဟင်…” လို့ မေးတယ် ။ “ ရတာပေါ့..ရတယ်…ရွှေနန်း..ခု ချိုးမလား….”လို့ သူပြန်ဖြေရင်း ရွှေနန်းအတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ထုတ်ပေးပြီး ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆပ်ပြာ ရှိမရှိ ကြည့်ပေးတယ် ။ “ ရပြီ.ရွှေနန်း..ရေချိုးလို့ရပြီ..” “ အိုကေ..ဒါဆို ရွှေနန်း ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် …” ရွှေနန်း ရေချိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဖုန်း မြည်လာပါတယ် ။ အို..ရွှေနန်းအတွက် စိတ်ပူလို့ ဒေါ်ရွှေဖြူ သန့်တို့ ဖုန်းခေါ်ပြီ ထင်တယ် ။ ဘယ်လို ဖြေရမလဲ..။ ရွှေနန်း သူ့တိုက်ခန်းမှာ ရေချိုးနေပါတယ် လို့တတ်နိုင်ရင် မဖြေချင်ဘူး ။
ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့ သူထင်ထားသလို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် မဟုတ်ဘဲ မထင်ထားတဲ့ ရွှေရေး ဖြစ်နေတယ် ။ “ ဟိတ်…ဘာလုပ်နေလဲ…” “ ရွှေရေး…..ဟိုလေ..ဒို့..တီဗီ ကြည့်နေတယ်….ဟင်းဟင်း…” “သူ့ကို မုန်းလို့ မေ့လို့ မရဘူးကွာ..ခက်တယ်…သိလား….ဟင်း..” “ ၀မ်းသာလိုက်တာ ရွှေရေးရယ်….ရွှေရေး ဒို့ကိုခွင့်လွှတ်လို့…” “ဒီမှာ…တခုပြောမယ်…အလုပ်ထွက်ဖို့ အမြန် လုပ်ပါ.. ရွှေရေးကို ချစ်ရင် ရွှေေ၇းစကားကို နားထောင်” “ ဘာလို့ အလုပ်ထွက်ခိုင်းနေတာလဲ ရွှေရေးရယ်…ဒို့က ရာထူးတောင် တက်ပြီ….” “ ဟင်..ဟုတ်လား….အေးလေ…နင်က အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူဘဲ…လူကြီးကလည်း ကြိုက်မှာပေါ့လေ..ငါ ကတော့ အပြင်စီးပွားရေးဘဲ လုပ်စေချင်တယ် …မင်းခစား ကမ်းနားသစ်ပင်လေဟာ…ကိုယ်ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ကိုယ် ကြိုမသိနိုင်တဲ့ဟာ….” “ ရွှေရေး..ဒို့၂ယောက် ဘယ်တော့ တွေ့ကြမယ် ဆိုတာသာ ပြော….” “ ဘာလုပ်ဖို့ တွေ့မှာလဲ..ခုလဲ ဖုန်းပြောနေတာဘဲ…” “ နင်ကလဲ သိသားနဲ့ဟာ…ရွှေရေးကလည်း…” “ ဟွန်း…မသိပါဘူး…” “ ကဲ..ကဲ..ဒီ ညနေ တွေ့ကြရအောင်…” “ အေး..ဖုန်းဆက်ကြည့်..ငါ အားမအား မသိသေးဘူး …” ရွှေရေး ဖုန်းချသွားပါသည် ။ အင်း..ငါလည်း ရွှေနန်း နဲ့ ရွှေရေး ကြားထဲမှာ တော်တော် မလွယ်ဘူး….ရွှေနန်းကိုလည်း သူ့အိမ်ကို အမြန်ပြန်ပို့ဖို့ လုပ်ရမယ် ..လို့ စိတ်ကူးကြံဆနေဆဲ ရေချိုးခန်း တံခါး ပွင့်လာသည် ။ ထမိန်ရင်လျားနဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ခေါင်းက ရေစိုနေတာကို သုတ်ရင်း ထွက်လာတဲ့ ရွှေနန်း ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ ပုခုံးသား လုံးလုံးဝင်းဝင်းလေးတွေ ရင်ဘတ် ၀င်းဝင်းလေး အပေါ်ပိုင်းတွေကို သူ မြင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားမိရသည် ။ “ ရေချိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ….အမူးနဲနဲ ပြေသွားသလိုဘဲ….” “ သံပုရာရေ သောက်အုံးမလား..ရွှေနန်း …” “ မသောက်တော့ဘူး…တခု လုပ်ပေးမလား….” “ တခု မကဘူး..လုပ်ပေးမယ်….ဘာလုပ်ပေးရမလဲ…” “ ရွှေနန်းကို မဆတ်ခ်ျ လုပ်ပေးမလား….” “ အင်း..ရတယ်လေ …ရတယ်…” လို့ ပြောတဲ့ သူ့အသံတွေ မူမှန်ရဲ့လား..။ တုန်ခါနေသလား…။ “ လာ..အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်မှာ လုပ်ပေးမယ် …” ရွှေနန်းနဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့ကြတာနဲ့ သူ့စိတ်တွေ ယိမ်းယိုင်ကုန်ပြီ ။ ရွှေနန်းကတော့ ဘာမှ မဖြစ်သလိုနဲ့ ကုတင်ပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်တယ် ။ တင်ကားကားလုံးလုံးတွေက သိသိသာသာ ခုံးမောက်နေသည် ။ ရွှေနန်းဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး ပုခုံးလေးတွေကို အသာ စနှိပ်ပေးလိုက်သည် ။ “ အားလေးထည့်ပြီး နှိပ်ကွာ..ပျော့လွန်းတယ်…” “ ရွှေနန်း နာသွားမှာ စိုးလို့ပါ….” ရွှေနန်းက ဟိုနေရာ..ဒီနေရာ နဲ့ သူနှိပ်စေချင်တဲ့ ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြောသည် ။
သူကလည်းရွှေနန်း စိတ်ကြိုက် နှိပ်ပေးနေသည် ။ သူ့ပေါင်ကြားက လက်နက်ကတော့ တအားထကြွနေသည် ။ ရွှေ နန်းရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးတွေကို ဒီလောက် ကိုင်နေရတော့ မကြွဘဲ ဘယ်နေတော့မလဲ ။ “ ပေါင်ကိုနှိပ်ပါအုံး…” ခက်တော့ ခက်နေပြီ ။ ပေါင်တန်လုံးလုံးတွေကို နှိပ်ပေးလိုက်တော့ တခါတခါ လက်က တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ထိမိသွားသည် ။ စိတ်၇ိုင်းတွေက တအား ထကြွဖေါက်ပြန်နေပြီ ။ “ အကို….” “ ဟင်..ရွှေနန်း….” “ ရွှေနန်း လှလားဟင်….” “ လှတယ်..ရွှေနန်း…” သူ့အသံတွေ တုန်ခါနေတာကို သူကဖါသာ သတိပြုမိသည် ။ “ မျက်နှာ လှတာလား..ကိုယ်လုံး လှတာလား….” သူဖြေရမှာ နဲနဲ တုန့်နှေးသွားသလိုဘဲ…။ “ နှစ်ခုလုံး လှတယ်…ရွှေနန်း….” “ ရွှေနန်း ခါးကို နှိပ်ပေးအုံး……” သေးကျဉ်တဲ့ ထွာဆိုင်ခါးလေးကို နှိပ်ပေးတော့ လက်ချောင်းတွေက တင်ပါးကြီးကို ထိမိပြန်သည် ။ “ ရွှေနန်း ဖင်တောင့်သေးရဲ့လားဟင်..” အိုး….ရွှေနန်း မေးခွန်းကို သူဖြေရမှာ ခက်နေသည် ။ “ မေးနေတယ်လေ….ဖင်တောင့်သေးရဲ့လားလို့…” “ တောင့်..တောင့်တယ်….” “ ကိုထက်နဲ့ ဖြစ်လိုက်လို့ ဖင်များ လျောသွားသလားလို့..သေသေချာချာ ကြည့်ပေးပါလား…” “ မလျောပါဘူး….ရွှေနန်း..လှတယ်….” “ နှိပ်ပေး…..” ဘယ်နေရာလို့ မပြောလို့ ဘယ်ကို နှိပ်ပေးရမှန်း သူမသိဘူး ..။ ခါးလေးကိုဘဲ ထပ်ဖိနှိပ်ပေးလိုက်သည် ။ “ “ အောက်ကိုဆင်းအုံး….ဖင်ကို နှိပ်ပေး….” ရွှေနန်းတော့ ဆိုးပြီ ။ ရွှေနန်း ဆိုးတာက သူ့အတွက် ကောင်းတာ ဖြစ်ပြီ ထင်သည် ။ စွင့်ကားတင်းအိနေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို သူ ကိုင်နယ်ပေးလိုက်သည် ။ ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော်က ငေါက်ကနဲ ထောင်သွားသည် ။ ပိုပြီး တင်းမာသထက် တင်းမာလာသည် ။ ရွှေနန်း တအင်းအင်းနဲ့ အသံထွက်လာသည် ။ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး…။ ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ကြားထဲကို သူ စမ်းလိုက်သည် ။ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်စမ်းသည် ။ “ ကြိုက်လား….ရွှေနန်း ဖင်တွေကို ကြိုက်လား…” “ အင်း..ကြိုက်တယ် …. အရမ်းလှတာဘဲ…“ “ ဟုတ်လို့လား…..မလျောသေးဘူးလား…” “ ဟင့်အင်း…မလျှောပါဘူး….အရမ်းတောင့်တယ်…..” တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်ညှစ်နေမိရသည် ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေ …။
ရွှေနန်းရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။ တခုခုကို ရှာဖွေနေသလို တရွေ့ရွေ့နဲ့။ ဖွားဖက်တော်က ပိုပို တင်းလာသည် ။ ရွှေနန်းလက်က မကြာခင် သွားလိုတဲ့နေရာကို ရောက်ရှိသွားသည် ။ ဖွားဖက်တော်ပေါ်ကို ရွှေနန်းရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ စမ်းမိသည် ။ ထိုးထွက်နေတဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ရွှေနန်း ကိုင်ပွတ်ကြည့်နေသည် ။ “ အကြီးကြီး ပါလား..အကိုရယ် …ဟင်း….” “ ပြ……ရွှေနန်းကို အကို့ဟာ ပြ…..” ရွှေနန်းသည် သူ့ဘောင်းဘီကကို ခါးပတ်ကို င်္ဆွဲချွတ်သည် ။ဇစ်ကို ဆွဲချသည် ။ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချသည် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲက ငေါထွက်နေတာကြီးကို ကြည့်ပြီး ခစ်ကနဲ ရယ်သည် ။ လက်နှစ်ဖက် နဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဘေးတဖက်တချက်ကနေ ကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည် ။ ဒုံးလက်နက်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေသည် ။ ပစ်ရန် အဆင်သင့် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသည် ။ ရွှေနန်းက သူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ “ ဟီး..ပူပူနွေးနွေးကြီး…..ရွှေနန်း နမ်းပေးရမလားဟင်….” “ အင်း….” ရွှေနန်းသည် သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးကို စပြီး ငုံစုတ်ပေးသည် ။ အား……ရွှေနန်း လျာလေးက သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးရဲ့ ထိပ်က အပေါက်လေးကို ကလိပေးလိုက်လို့ သူ့တကိုယ်လုံး တွန့်သွားရအောင် အရသာ ထူးသွားရသည် ။ ရွှေနန်းသည် ပုလွေမှုတ် တော်တော် ကျွမ်းတာကို သူသိလိုက်ရသည် ။ သူခေါင်းထဲမှာ ဒီလောက် ပုလွေကောင်းပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လာကုန်းပေးတဲ့ လှလည်းလှ တောင့်လဲတောင့်တဲ့ ရွှေနန်းကို ဘာလို့ သူ့ဘဲ ကိုထက်က သစ္စာဖေါက်ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိလိုက် သည် ။ တဏှာစိတ် ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် ရှေ့ကို ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို မတွေးတော့ဘဲ ရွှေနန်းဘုံကို အပီဖြုတ်ဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ..။ ရွှေနန်းသည် အားရပါးရ လီးကို စုတ်ပေးနေတာ တခါတခါ ပွပ်..ပွပ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်ထွက်လာသည် ။ အိုး…ဟား…..အား…….ကောင်းလိုက်တာ ရွှေနန်းရယ် ….လို့ သူ့ပါးစပ်က အသံထွက် ညည်းမိရ သည် ။ရွှေနန်းက လက်တဖက်နဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော် အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး စိတ်ပါလက်ပါ စုတ်ပေးနေပြီး ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး သူမ ပေါင်ကြားဆီကို ပို့ပေးသည် ။ သဘောကတော့စောက်ပတ်ကို ကိုင်..ဆိုတဲ့သဘော ..။ မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထမိန် အပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်သည် ။ စိတ်ရိုင်းတွေက ၀ုန်းကနဲ ထသွားရပြီး “ ရွှေနန်း..အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ ပြောလိုက်မိသည် ။ ရွှေနန်းရော သူေ၇ာ စုတ်တဲ့ ကိစ္စကို ရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်ကြသည် ။ အ၀တ်မပါကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတဲ့ သူနဲ့ ရွှေနန်း တယောက်နဲ့တယောက် သေသေချာချာ ကြည့်မိကြသည် ။ ရွှေနန်းက အကိုက အ၀တ်မပါဘဲ အရမ်း ကြည့်ကောင်းတာဘဲ ဆက်စီ ဘဲ..လို့ ပြောလိုက်တော့ သူကလည်း ရွှေနန်းကို “ ရွှေနန်းကလည်း အရမ်းကို လှတာဘဲ….ရွှေနန်းကိုလည်း ဒို့ နမ်းလို့ရမလာဟင်…” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ ရွှေနန်းလည်း သူ့ကို အဖုတ်ယက်ချင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး ကုတင်ပေါ် ပေါင်ကား ကာ ထိုင်ပေးသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ စောက်ဖုတ်က ခုံးမို့ပြီး အကြီးကြီးဘဲ ..။
တဏှာအရှိန် ကြောင့်များ ပို ဖေါင်းခုံးနေလေသလား မသိဘူး ..။ အမွှေးပါးပါးလေးတွေ ရှိနေပေမယ့် နှုတ်ခမ်းသားတွေရဲ့အနီးအနား နေရာတွေမှာတော့ ရှင်းထားတာကို သတိထားမိသည် ။ ရွှေနန်း ပေါင်ဖြူဖြူတွေ ကြားထဲ ခေါင်းအပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို နမ်းရှုံ့မိသည် ။ အရေတွေ စိုရွှဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ စယက်တဲ့အချိန် ရွှေနန်းက “ မရွံဘူးလား အကိုရယ်..အရည်တွေ ရွှဲ နေတယ်…” လို့ ညည်းသလို ပြောလိုက်ပေမယ့် သူယက်တာတွေကို မျက်လုံးလေး မှေးစင်းပြီး အရသာ ခံနေသည် ။ “ အင်း…အင်…အင်း..အင်……” နဲ့လည်း ညည်းငြူနေသည် ။ တချိန်လုံး ဒီကောင်မလေးနဲ့ အတူတူ သွားလာနေခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ အလှအပတွေကို နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့ တိတ်တခိုး ခိုးကြည့်နေခဲ့ရတာ အခုတော့ သူသည် ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေရတာကလည်း အိပ်မက်တခုလို မယုံနိုင်စရာတွေ ဖြစ်သွားတာပါဘဲ ။ စောက်စိလေးက ထောင်ပြူးထွက်နေသည် ။ လျာဖျားလေးနဲ့ မထိတထိ တို့ထိလိုက် ယက်လိုက် လုပ် ပေးတော့ ရွှေနန်း သဘောကျသည် ။ သူ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်လာသည် ။ လက်နဲ့ နို့ကြီး တလုံးကို လှမ်း ကိုင်ကြည့်လိုက်သည် ။ တင်းမာလုံးဝန်းနေတဲ့ အရသာက ကောင်းလွန်းလို့ နို့ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဘဲ ဆုပ်နယ်နေမိသလို နို့သီးခေါင်းမာမာလေးကိုလည်း လက်ချောင်းတွေက ပွတ်သပ်မိ ရသည် ။ စောက်ဖုတ်ကို စိတ်တိုင်းကျ စုတ်ယက်ပေးလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းလည်း တော်တော်ကြာလာတော့ သူ့ခေါင်းကို တွန်းလိုက်ပြီး….“ ရွှေနန်း..လိုချင်ပြီကွာ…..လုပ်ပါတော့…” လို့ ဖီလင်တက်နေတဲ့ အသံ လေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ဖေါင်းကြွမို့မောက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကနေ မျက်နှာကို ခွာလိုက်သည် ။ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံသည် ဘာဂျာ အပြင်းအထန် ကိုင်ထားလို့ ထူအမ်းနေသည် ။ ရွှေနန်းကိုယ်ပေါ်ကို သူတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဒူးတွေက အလိုလို ရွှေနန်းရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ဘေးကို တွန်းပို့လိုက်မိပြီး သူ့ကိုယ်လုံးသည် ရွှေနန်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲမှာ ရောက်ရှိနေရာယူပြီး ဖြစ်သွားသည် ။ တနည်းဆိုရသော် ရွှေနန်းသည် ပေါင်ဖြဲကားရက် အနေအထား နဲ့ ဖြစ်နေပြီ ။ ရွှေနန်းသည် သူက သူ့ဖွားဖက်တော်ရဲ့ အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း ကို ပွတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားပြီး..“ အို..ဟာဟာ…..အင်ဟင်…” လို့ ညည်းလိုက်သည် ။ ကွေးညွှတ်လှပတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပွင့်ဟသွားသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့စောက်ဖုတ်က စိုပေနေတဲ့ အရည်တွေနဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ခေါင်းပိုင်း ဒစ်လုံးကြီး စိုလူးသွားပြီးတဲ့ နောက်သူသည် ဖွားဖက်တော်ကို စောက်ဖုတ်အပေါက်ထဲ ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အို့…အင့်အင့်…အမလေး …” အိုအိနူးညံ့တဲ့အထဲ မြုပ်ဝင်သွားတဲ့ အထိအတွေ့က ထူးကဲလှသည် ။ ဒစ်လုံးကြီး စောက်ခေါင်းထဲ မြုပ်ဝင်သွားတော့ ရွှေနန်းရဲ့ ညည်းသံလေး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာပြီး သူ့လက်မောင်းတွေကို သူမလက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆုပ်ညှစ်လိုက်သည် ။
အရည်တွေက တအား ရွှဲစိုနေတာကြောင့် စိုအိနွေးထွေးတဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို ဒစ်လုံးကြီး မြုပ်ဝင်သွားသည် ။ ရွှေနန်းသည် မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ခေါင်းကိုမော့ထားနေသည် ။ သူ အဆင်ပြေ နေတာ တွေ့ရတော့ သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ဆက်ထိုးသွင်းသည် ။ အိစက်ချောနေပေမယ့် တင်းကြပ်နေတဲ့ အတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်တိုက်ရင်း တထစ်ထစ်နဲ့ အတွင်းကို တိုးဝင်သွားတဲ့သူ့ဖွားဖက်တော် ရလိုက်တဲ့ထူးခြားလှတဲ့ အရသာကြောင့်သူ့စိတ်တွေ ပြင်းထန် သထက် ပြင်းဖန်လာရသည် ။ နောက်ကို နဲနဲပြန်ဆုတ်ပြီး ထပ်ဖိသွင်းထည့်လိုက်မိပြန်သည် ။ ဒီတခါတော့ ဖွားဖက်တော် ဒုတ် အဆုံးထိ ရောက်သွားအောင် သွင်းလိုက်သည် ။ “ အကို….ေ၇ွှနန်းကို ကြိုက်လားဟင် ….” “ ကြိုက်တယ်..ရွှေနန်း …” “ ရွှေနန်းလည်း အကို့ကို ကြိုက်တယ် …အကို အားမနာနဲ့နော်..ရွှေနန်းကို စိတ်ကြိုက်သာ လုပ် ..” ရွှေနန်းထဲကို တချက်ချင်း သူဆောင့်ထည့်ပေးသည် ။ ရွှေနန်းလည်း တအင်းအင်းနဲ့ သူမတင်ပါးကြီးတွေကို အောက်မှ ကော့ပေးသည် ။ တင်ပါးကြီးတွေကို နှဲ့လိုက် ၀ိုက်လိုက် လုပ်ပေးသည် ။ ကိုထက်နဲ့ အတွေ့အကြုံရပြီးမို့ ကျွမ်းနေတာဘဲ လို့ သူသိလိုက်သည် ။ “ အင်း..အင်း….ကောင်းတယ်အကို….လုပ်..လုပ် …” အရည်တွေ အရမ်းလိုက်လွန်းတာကြောင့် ဆောင့်ထည့်တဲ့အချိန် ဖွတ်ဖွတ် ဖပ်ဖပ် အသံဘလံတွေ ထွက်ပေါ်လာသည် ။ ရွှေနန်းက မြန်စေချင်လာတာကြောင့် မြန်မြန် သွက်သွက် ထိုးဆောင့်ပေးလိုက်သည် ။ တချက်တချက် စောက်ဖုတ်နဲ့ လိင်တန် သွတ်သွင်း ပွတ်တိုက်တဲ့နေရာက လေအန်သံ ဘွပ် ဘွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာတော့ အရှိန်ကောင်းကောင်း လုပ်နေဆဲ ရွှေနန်းရဲ့ ရယ်သံလေး တခိခိကို ကြားရသည် ။ အောက်က ရွှေနန်းက တအားပင့်တအားကော့ပေးနေတာတွေ ပိုမြန်လာသလို ရွှေနန်း အော်ညည်းသံတွေ ကို ကျယ်လာတော့ ရွှေနန်းတအားအရှိန်တက်နေပြီဆိုတာသူသိလာတော့ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ပေးလိုက်သည် . “ အား…အား..အား……အို..အို…အို…အင်းအင်းအင်း……..အားအား…..” ရွှေနန်း ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး တွန့်လိန်ကာ လမ်းဆုံး ပြီးခြင်းကို ရောက်ရှိသွားသည် ။ “ အကိုရယ်…ကောင်းလိုက်တာ..အကိုရော ကောင်းလားဟင်…..” “ အင်း…အရမ်းကောင်းတယ် …. ” တော်တော်လေးကြာအောင် ကုတင်ပေါ်မှာ ယှဉ်တွဲကာ နားနေလိုက်ကြပြီး ရွှေနန်းကို အိမ်ပြန်ကြမလား လို့ သူ မေးလိုက်တော့ ရွှေနန်းက အကိုနဲ့ နေရတာ မ၀သေးဘူးကွာ.. …ရွှေနန်း မပြန်ချင်သေးဘူး….” လို့ ပြောလို့ နောက်တကြိမ် နောက်တကြောင်း ထပ်ဆွဲပေးရအုံးမယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်သည် ။ “ မမာမတောင်ဘဲ ဒီအတိုင်းနေတာတောင် အရမ်းတုတ်တာဘဲ…ရှည်လည်း ရှည်တယ်…” ရွှေနန်းက သူ့ဖွားဖက်တော်ကို ကျကျနန ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ကာ ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ဆေးကြောပေးရင်း ပြောလိုက်ပါသည် ။
ရွှေနန်း လက်ကလေးနဲ့ ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ သူ့ဖွားဖက်တော်သည် ငေါက်ကနဲ ထထောင်လာသည် ။ရွှေနန်းက သဘောကျစွာနဲ့ ရယ်မောရင်း ဖွားဖက်တော်ကို လက်နဲ့ ကွင်းတိုက်သလို ရှေ့နဲ့နောက် ပွတ်တိုက်ပေးသည် ။ ဖွားဖက်တော်လည်း ရုတ်ချည်း ပြန်လည်ရှည်ထွက် ကြီးထွားလာရပြန်သည် ။ ဒုတိယအချီမှာ တော်တော်ကြာသည် ။ ရွှေနန်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ အကောင်းဆုံး ဆွဲပေးလိုက်သည် ။ ဒီ ဒုတိယအချီမှာ သူသုံးချီ တောင် ပြီးတယ် လို့ ရွှေနန်းက ပြောတယ် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးတွေကို ဖင်ထောင်ကုန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်ရရင် ကောင်းမှာဘဲ လို့ သူ စိတ်ကူးရလို့ “ လေးဘက်ကုန်းပေးမလား ရွှေနန်း..” လို့ သူ မေးလိုက်သည် ။ ရွှေနန်းက ကြည်ဖြူစွာဘဲ သူ လိုလားသလို ဖင်ထောင်ကုန်းပေးသည် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ အောက်ဖက်က စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးပြူးကြီး ထွက်နေသည် ။ ဒီလို လိုးရတာကို သူ သဘောကျတာက စောက်ဖုတ်ထဲ သူ့ဒုတ် ၀င်ထွက်တာကို ကြည့်လို့ရလို့.. ။ ဖင်ပေါက်လေးကိုလည်း ကြည့်ပြီး သူ ကလိချင်လာသည် ။ ရွှေနန်းဖင်ကို တောင်းလိုးဖို့လည်း သူ စိတ်ထဲမှာ ကြံစည်ထားလိုက်သည် ။ စအိုပေါက်လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ဖိဖိချေပွတ်ရင်း အကျင့်လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ တချိန်မှာ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို ထိုးနှစ်မည် ။ ဒုတိယအချီက စိမ်ပြေနပြေ လိုးတဲ့ ပွဲဘဲ ..။ သူရော ရွှေနန်းရော ချွေးတွေ တုတ်တုတ်ရွှဲကြရသည် ။ ရွှေနန်းကို အိမ်ပြန်ခေါ်သွားလိုက်သည် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်လည်း သမီးပြန်ရောက်လာလို့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ် ။ သူ့ကီု ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတယ် ။ သူပြန်ခါနီးမှာ ရွှေနန်းကလဲ “ အကို့ကို ရွှေနန်း ကျေးဇူးတင်တယ် ..” လို့ လာပြောတယ် ။ ဘာအတွက် ကျေးဇူးတင်တာလဲ…။ ရွှေနန်းရဲ့ ပြီတီတီ ရီဝေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က သူ့ကို နှစ်ချီကောင်း ဖြုတ်ပေးတာနဲ့ ဘာဂျာ အကြာကြီး ကိုင်ပေးတာကြောင့်..ဆိုတဲ့ သဘော ..။ ရွှေနန်းတို့အိမ်က ပြန်လာပြီး ရေအမြန်ချိုး အ၀တ်အစားလဲရတယ် ။ အ၀တ်အစား လဲနေတုံးဘဲ ဖုန်းလာတယ် ။ ရွှေရေးလွင်လွင် ခေါ်တာ ။ ရွှေရေးက “ မလာသေးဘူးလား….” လို့ ခပ်မာမာလေသံနဲ့ ပြောလိုက်တာ ခံရတယ် ။ “ လာပြီ..လာပြီ..ရွှေရေးရေ….ခုထွက်လာပြီ….” ရွှေနှစ်ရွှေ ကြားမှာ ပြေးလွှားနေရသည် ။
ရွှေနန်းကို ခုလေးတင် နှစ်ချီကောင်း ဖြုတ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာခင် မှာ ရွှေရေးကို ဖြုတ်ပေးရဦးမည် ။ ရွှေရေး သည် သူ့ကို သူ ၀ယ်ထားတဲ့ ကြို့ကုန်းက တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ် ။ တိုက်ခန်း အသစ်ကို ပြချင်လို့ ဆိုပြီး ။ တိုက်ခန်းအသစ်ကိုလည်းရောက်ရော အခန်းထဲကို ခြေတလှမ်း စ၀င်လိုက်တာနဲ့ ရွှေရေးနဲ့ သူ အငမ်းမရ ဘဲ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်တွယ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ဖိကပ်စုတ်မိကြတယ်။ တိုက်ခန်း အသစ်ချပ်ခွတ်ဆိုတော့ ဘာခုံဘာကုလားထိုင် ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး ။ အုတ်နံရံကို မှီပြီး ရေအရေးနှုတ်ခမ်းထူထူတွေကို တအား စုတ်ရင်း ရွှေရေး နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီပေါ်ကနေဘဲ ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိတယ် .။ ရွှေရေးက မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး “ ဟိတ် အင်္ကျီတွေ ကျေကုန်မယ်ကွာ…ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ တဏှာထန်နေသလား…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ တဏှာ မထန်ဘဲ ခပ်အေးအေး နေပြန်ရင်လဲ ရွှေရေးက “ လူကြီးသမီးနဲ့များ ခိုးစားနေကြသလား..ရွှေရေးကိုတောင် စိတ်မလာတော့ဘူး မဟုတ်လား…” လို့ ပြောမှာ..။ “ ကဲ ထင်အောင်ကျော်..လိုးချင်ရင်လဲ အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်..ဘာလဲ ..ချွတ်ပေးရအုံးမှာလား….” လို့ ပြောလိုက်လို့ ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရတယ် ။ ဖွားဖက်တော် လိင်တန်ချောင်းကတော့ ရွှေရေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ အခန်းထဲ ရောက်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ မတ်မတ်ထောင်နေပြီလေ ။ လိင်တန်ကြီး တောင်မတ်လျက် ရှိနေတဲ့ သူ့ကို ရွှေရေးက သဘောကျစွာနဲ့ ကြည့်ပြီး “ ထင်အောင်ကျော်..ယူကတော့ ဒို့ကို လိုးဖို့ အမြဲ အဆင်သင့် အဲဗားရယ်ဒီ ဖြစ်နေတဲ့ အလိုးသမား ချစ်သူဘဲပေါ့နော်..” လို့ ပြောလိုက်ရင်း ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ။ လိင်တန်ချောင်းက ဘာလာ တော့မည် ဆိုတာကို ကြိုသိနေသလား မသိပါဘူး ။ ရွှေရေးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကပ်ကပ်လေး ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတယ် ။ ရွှေရေးက ဒစ်လုံးကြီးကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖပ်ကနဲ ပုတ်လိုက်ပြီး..“ နင့်ကို ငါလွမ်းနေတယ် သိ လား..” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ လိင်တန် အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ် ။ ပုလွေကိုင်ပေးတော့မှာမို့ လိင်တန်ချောင်းက ပိုထွားပိုကြီး ပိုရှည်လာသလိုဘဲ ။
ကာမ အရသာထူးတွေ ရတော့မယ် ဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ စိတ်တွေက အဆုံးစွန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထကြွလာရတာကြောင့်ပါ ..။ အရင်ဆုံး လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို ပြွတ်ကနဲ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ နမ်းလိုက်တဲ့ ရွှေရေးဟာ တကယ်ဘဲ သည်လိင်ချောင်းကြီးကို သတိရ တမ်းတ လွမ်းနေတဲ့ ပုံပါ ။ လိင်တန်ကြီးကလည်း အကြောတွေ ထင်းထောင် ထနေတယ် ။ ထိပ်ပေါက်ကလည်း အရည်လေးတွေ ယိုစီး ကျနေတယ် ။ ဒီ အရည်လေးတွေကို ရွှေရေးက လျာဖျားလေးနဲ့ ယက်လိုက်တယ် ။ “ ယူ့လီးကြီးက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုဘဲကွာ….”းတွေ တကယ်တော့ ရွှေရေး စုတ်ပေးတာကို ခံချင်လှပြီ ။ ရွှေရေးက တို့ထိ တို့ထိလေးတွေ လုပ်နေသည် ။ ဂွေးစိနှစ်လုံးကိုလည်း ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်နေပြန်သည် ။ သည်လို အချိန်ဆွဲပြီး မထိတထိ ကစားနေလေလေစိတ်တွေက တအားကို ထကြွလာလေလေ ပါ ။ ရွှေရေးက အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ ဘရာစီယာ ဖြူဖြူလေးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မနိုင်မနင်း ချုပ်ထားနေသည် ။ နို့ကြီးတွေက ဘရာစီယာရဲ့ ချုပ်နှောင်မှုအောက်က အတင်းကြီး ရုန်းကန်ထွက်ချင်နေ ကြသလိုဘဲ ။ ဘရာစီယာ ချိတ်လေးကို ရွှေရေး လက်နောက်ပစ်ပြီး ဖြုတ်ခွာပစ်လိုက်တယ် ။ကော့ချွန်ဖြိုးမောက်တဲ့ နို့ကြီးတွေက အချုပ်နှောင်အောက်က လွတ်မြောက်လို့ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားနဲ့ ခေါင်းမော့နေကြတယ် ။ ဒူးထောက် ထိုင်ချပြီး အငမ်းမရဘဲ နို့သီးနီညိုညိုလေးတဖက်ကို စို့မိရတယ်။ “ ဟေ့..နေအုံးကွာ..လီးကို အရင် စုတ်ပေးအုံးမယ် …” ရွှေရေးက သူ့ကို မတ်တပ် ပြန်ရပ်ခိုင်းတယ် ။ ရွှေရေးသည် ပုလွေပညာစွမ်းတွေ ပြပါတော့တယ် ။ရွှေရေးရဲ့ လျာလေးက ဒစ်လုံးကြားကို ယက်ပေးနေတယ် . ထိပ်ပိုင်းကို အရင် ကလိနေတယ် ။ သူ အရမ်း ထိလို့ရွှေေ၇း ခေါင်းလေးကို ယောင်ယမ်းပြီး ကိုင်မိ၇တယ် ။ နုတ်ကလည်း အသံတွေ ညည်းမိရတယ် ။ လိင်တန် အရင်းပိုင်းအထိ ရောက်အောင် ငုံငုံဆွဲပြီး စုတ်ပေးနေတယ် ။ လိင်တန် တချောင်းလုံး ရွှေရေး ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတယ် ။ ရွှေရေးရဲ့ အစုတ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ အရသာ ထူးကဲ နစ်မျောနေမိသလဲ မသိဘူး ။ ရွှေရေး အစုတ်ရပ် လိင်တန်ကို ပါးစပ်ကနေ ချွတ်ဖယ်လိုက်တော့မှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိတယ် ။
ရွှေရေးက “ တော်ပြီနော်…လိုးကြစို့..” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်လို့ ဒီ သံမံတလင်းကြမ်းမှာဘဲ ဆွဲကြရမယ် လို့ ထင်မိလိုက်တယ် ။ ရွှေရေးက..“ အို..ဒီမှာ မဖြစ်ပါဘူး..အိပ်ခန်းထဲ သွားရအောင်..” လို့ ပြောပြီးသူ့လက်ကို ဆွဲကာ အိပ်ခန်းထဲ ကို ခေါ်သွားပါတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ ဖျာတချပ် နဲ့ မွေ့ရာလိပ်တလိပ် ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ် ။ ရွှေရေးက ထမိန်ကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ အတါင်းခံ ပင်တီ မပါလို့ ထမိန် ချွတ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်သွား တာ ၀င်းဝင်းဖြူဖြူ ဖင်တုံးကြီးတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ အခုဘဲ အစုတ်ကောင်းကောင်း ခံထားရလို့တအားလိုးချင်နေတဲ့ လီးကလည်း တဆတ်ဆတ်ခါနေပြီ ။ ရွှေရေးနဲ့ လှေကြီးထိုးဘဲ အမြန် ဆွဲလိုက်ကြတယ် ။ ရွှေရေးကလည်း ထန် သူကလည်း ထန် ဆွဲလိုက်ကြတာ တဖေါင်းဖေါင်းဘဲ ။ အရေတွေကလည်း လိုက်တော့ တဖွပ်ဖွပ် တဘွပ်ဘွပ် အသံတွေ ကို ဆူညံသွားရတာ..။ ရွှေရေးကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မို့ တအား အော်တယ် ။ ညည်းတယ် ။ပြီးခါနီး အရှိန်နအား တက်လာတဲ့အခါ ရွှေရေးလည်း….“ လိုး..လိုး..တအားလိုး…ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား.. လိုးစမ်းပါ..ဆောင့်ဆောင့်..တအားဆောင့်ထည့်….” လို့ အော်ပါတယ် ။ ငယ်ငယ်က ခိုးဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အပြာစာအုပ်တွေထဲကလိုဘဲ လို့ အမှတ်ရလိုက်တယ် ။ ရွှေရေး ကောင်းစေဖို့ စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ သူတောင်းဆိုသလို ပြင်းပြင်းနဲ့ မြန်မြန် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရွှေရေးလည်း ဖင်ကြီးတွေ ကော့ပေးလိုက် စကောဝိုင်း မွှေ့ရမ်းပေးလိုက် လုပ်နေတယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ချွေးတွေ စိုစိုရွှဲနေကြပြီ ..။ ဆက်တိုက် ကြုံးလိုးနေတာ ..။ ရွှေရေး စောက်ပတ်ကလည်း သူ့လီးကို ညှစ်ယူဆွဲနေသလို အရသာ က ထိမိ ကောင်းလှတယ် ။ “ အမလေး..ကောင်းကောင်း..ကောင်းနေပြီ..အို..ဆောင့်ဆောင့်…အာ..အား…အား….အား…အိုး….ပြီးပြီ…. အား….ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ….ဆောင့်…ဆောင့် မရပ်လိုက်နဲ့..အသေဆောင့်……….” ရွှေရေး တတွတ်တွတ် ညည်းအော်ရင်း သူ့ကို တအား ဖက်ညှစ်ပြီး “ ပြီး ” သွားပါတယ် ။
သူလည်းသုတ်ရည်တွေ တစစ်စစ် နဲ့ အများကြီး ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ရွှေရေးနဲ့ မရှေးမနှောင်း ဆိုသလိုဘဲ ပြီးဆုံး ခြင်းကို ရောက်ရှိသွားရပါတော့တယ် ။ ရွှေရေးက သူ့လီးကို အဖုတ်ထဲက ထုတ်ခွင့်မပြုဘူး ။ စောက်ခေါင်းထဲမှာ ဆက် ထား စိမ်ထားခိုင်းတယ် ။ “ နင် တကယ်လိုးနိုင်တဲ့ကောင်ဘဲ…ထင်အောင်ကျော် …ငါ..ငါ ကြိုက်တယ်….” လို့ ရွှေရေး မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ ပြောလိုက်တယ် ။“ နင့်စောက်ပတ်ကလည်း တအား လိုးလို့ကောင်းတာဘဲ ရွှေရေးရယ် ..ငါ့လီးကို ရစ်ပတ်ဆွဲ.ူနေသလိုဘဲ….မျှော့်ပါတဲ့ စောက်ပတ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မယ် …” လို့ သူကလည်းရွှေရေးကို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ။ .“ အဲဒါ အလိုလို ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး…ငါ ညှစ်ညှစ်ပေးလို့ ဟဲ့..နင်ကြိုက်ရင် ငါ အမြဲ အဲလို ညှစ်ပေးမယ် …နင် ကောင်းတယ် ဆိုလို့ ငါ ၀မ်းသာပါတယ် …” လို့ ရွှေရေးက ပြောပါတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ချီလောက် ရွှေရေးနဲ့ ဆွဲဖြစ်မှာပါဘဲ ..။ ရွှေရေးရဲ့ စောက်ဖုတ် ကြွက်သားတွေ ညှစ်ပေးခြင်းက သူ့ကို အရသာ အရမ်းထူးကဲစေသည် ။ ထိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း ကြပ်တည်းစီးပိုင်တဲ့ အရသာကို ရရှိသည် ။ ကြာကြာ ဆက်မလိုးနိုင်ဘဲ သုတ်တွေ ပန်းထွက်ခါ ပြီးခြင်းကို ရောက်သွားချင်သည် ။ ရွှေရေးက ကုတင်ပေါ်က ဆင်းသည် ။ “ ငါ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ်…” “ ငါလည်း နင်နဲ့ အတူတူ ရေချိုးချင်တယ်…” “ အို..ထင်အောင်ကျော်..အေးဆေး နေစမ်းပါဟာ…ငါ အေးဆေး ချိုးပါရစေ…” ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ရေချိုးခန်းဆီကို ရွှေရေး လျှောက်သွားတာကို ကုတင်ပေါ်က ကြည့်နေမိသည် ။ ရွှေရေးရဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေက တုန်ခါ လှုပ်နေတာကို တွေ့ရတာ သူ့ဒုတ်တောင် ပြန်မာသွားသလိုဘဲ..။ ရွှေရေး နောက်ကို သူ လိုက်သွားလိုက်သည် ။ ရေချိုးခန်းက ပိတ်မထားဘူး ။ သူဝင်သွားတော့ ရွှေရေးသည် ရေပန်းအောက်မှာ သူ့ကိုယ်လုံးတွေကို သူ့ဖါသာ ပွတ်တိုက်ရင်း ရေချိုးနေသည် ။ “ ဟိတ်..ဘာလို့ လာတာလဲ..” “ ရွှေရေးနဲ့ အတူတူ ချိုးချင်လို့..” “ နင် သိပ်ကဲတာဘဲကွာ….” ရွှေရေးအနား ပူးကပ်ပြီး ရွှေရေး ဖင်တုံးတွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ “ အိုး ..ဟေး….” နောက်တနေ့ မနက် ၁၀နာရီ ကျော်ကျော် ..။ “ မမတို့က ထင်အောင်ကျော့်ကို ဘယ်လောက် သဘောကျတယ်..သံယောဇဉ်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာ ထင်အောင်ကျော်လည်း သိမှာပါ..ဒါပေမယ့်လေ..မမတို့မိသားစု အတွက်ထက် ထင်အောင်ကျော် ရဲ့ ရှေ့ တိုးတက်ရေးက အရေးကြီးသေးတယ်လေ..မမတို့ မိသားစု နဲ့ နေတာထက် အရေးကြီးတဲ့ တခြား တာဝန်တခုခုကို လုပ်ရင် မင်းအတွက် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ မင်းတို့ “ အဘ ”က မမကို ပြောပြတယ်..” ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က ကားမောင်းနေတဲ့ သူ့ကို ပြောပါတယ် ။
ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က သူ့ကို ကားမောင်းခိုင်းလို့ ဒီနေ့ မနက် သူတို့အိမ်ကို ရောက်ရောက်ချင်း လိုက်မောင်း ပေးရပါတယ် ။ ရွှေနန်းဘုံကတော့ မနိုးသေးပါဘူး ။ အိပ်နေတုံး ..။ သူ့နေရာမှာ အစားထိုးမယ့် အရာ ရှိလေးတယောက် ရောက်နေပြီ ။ သူက စစ်ရုံးချုပ်ကို ပြောင်းရမယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က မြို့သစ်မှာ ဆောက်နေတဲ့ သူတို့ တိုက်ကို လိုက်ပို့ခိုင်းတာ ။ တိုက်က တော်တော်ပြီးနေပြီ ။ တိုက်ကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်နဲ့ အတူတူ လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန် ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်က “ အေမီကလည်း မင်းကို အကူအညီတခု တောင်းစရာ ရှိလို့တဲ့…အေမီ့ဆီကို သွားလိုက်ပါအုံး..ထင်အောင်ကျော်…” လို့ ရုတ်တ ရက် ပြောလိုက်တယ် ။ “ ဟုတ်ကဲ့..မမ ” လို့ သူဖြေလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ရွှဖြူသန့်က ဒီတိုက်က အဘ အနားယူပြီးတဲ့အချိန် နေဖို့လို့ ပြောပြပြီး ရွှေနန်းဘုံအတွက်လည်း သူတို့မိဘတွေ ပေးခဲ့တဲ့ မြေကွက်တကွက် ရှိသေးတယ် ..ရွှေနန်း အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ နေဖို့ အိမ် ဆောက်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ် လို့ ပြောပြတယ် . .။ ဒီအချိန်မှာဘဲ တိုက်ရှေ့ကို ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ရဲ့ ကား ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ကဘဲ ဒီတိုက်ကို အစစ တာဝန်ယူပြီး ဆောက်နေတာပါ ။ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က တိုက်ပြီးစီးတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်ကို ရှင်းပြပြီး “ အထူးဆိုင် ” ကနေ ပစ္စည်းတွေ သူထုတ်ပေးမယ့်အကြောင်းတွေ ပြောပြတယ် ။ အထူးဆိုင် ဆိုတာက လူကြီးမိသားစုတွေဘဲ ၀ယ်နိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဆိုင်ပါ ။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်လည်း အခုလထဲ မင်္ဂလာဆောင်တွေ တက်ရောက်ဖို့တွေ တော်တော်များများ ရှိနေတာကို သတိရသွားပြီး မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေ ၀ယ်ရမယ် …ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ကို အထူးဆိုင်ကို သွားရအောင်လား..လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ “ ဟုတ်ကဲ့..မမ…..ကျနော် လိုက်ပို့ပါမယ် …” လို့ ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်က ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ရွှေဖြူ သန့်က “ ဒါဆို..မမ..ဗိုလ်မှူးလွန်းမောင်ရဲ့ ကားနဲ့ လိုက်သွားလိုက်မယ်…ထင်အောင်ကျော်ရေ..အေမီ့ဆီ ကို အခုဘဲ သွားလိုက်ပါလား..ကွယ်…” လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ် ။ သူဖြေရတာက “ ဟုတ်ကဲ့…မမ…” ပါဘဲ ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ အိမ်ကို သူရောက်သွားတယ် ။ သူ့အကူအညီကို လိုနေတယ် ဆိုကထဲက ဘာအကူအညီလည်း ဆိုတာ သူသိလိုက်ပြီးသား ။ အိမ်ဖေါ်မလေး တယောက်က ခြံတံခါး လာဖွင့်ပေးတယ် ။ “ ဒေါ်အေမီသွင် …ရှိလား …” “ ရှိပါတယ်…ရှင့်…” တိုက်ကြီးတခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ် ။ သူ ဧည့်ခန်းကြီးထဲ လျှောက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အေမီသွင် အပေါ်ထပ် လှေခါးကနေ ဆင်းလာတယ် ။ “ အမလေး..ပေါ်တော်မူကြီး….မမ အပေါ် စိမ်းကားနေတာပေါ့လေ….” ဒေါ်အေမီသွင်သည် ခပ်ပါးပါး ပျော့ပျော့ပိတ်သားနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီပွပွလေးကို ၀တ်ထားတာ အတွင်းမှာ ဘရာစီယာ မပါတာကြောင့် ရင်စိုင်ကြီး နှစ်လုံးကို ၀ိုးတိုး ၀ါးတား တွေ့နေရတယ် ။
လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း ဒီရင်သားတွေက တုန်တုန်သွားနေတယ် ။ “ မမလည်း တယောက်ထဲ အရမ်းပျင်းတာဘဲ…မမ ယောက်ျားက နိုင်ငံခြား ထွက်သွားပြန်ပြီ …. မမလည်း မင်းကို အကူအညီတောင်းမလို့ …” “ ဟုတ်ကဲ့..မမ…ကျနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင်…” မခို့တရို့ နဲ့ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းကို ကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး “ မင်း ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာ မင်း သိပါတယ်ကွယ်…မမ တအား လိုချင်နေတယ် ..ဟိုတခါကလိုဘဲ.. ပေါ့….” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းတဲ့ မိန်းမချောကြီးကို အလိုဖြည့်ပေးဖို့ တာဝန်ကျရောက်လာပြီ ။ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့စတမ်း ..။ “ ဟုတ်ကဲ့မမ…မမ လိုအပ်နေတာတွေ ကျနော် အကုန် လုပ်ပေးမယ်…မမ…” လို့ သူပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့လက်ကို ဆွဲပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်သည် ။ မကြာခင် အလုပ်တွေ များတော့မှာ သိနေတဲ့ လက်နက်ကြီးက မတ်မတ်ထောင်လာသည် ။ ပစ်ရန် အသင့် အနေအထားပေါ့ ..။ အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်လိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်အေမီသွင်က သူ့ခါးကို လာဖက်တယ် ။ “ မင်းကို ဒို့က လွမ်းနေတာ သိလား….ဟင်း…ဘာလို့ ဒို့ဆီ မလာတာလဲ..ဖုန်းလေးတောင် မဆက်ဘူး” ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ကြသည် ။ ရွှေရေး..ရွှေနန်းတို့ကို အိပ်ရတာနဲ့မတူတာက ရွှေရေး..ရွှေနန်း တို့က အပျို..အိမ်ထောင် မရှိသူတွေ..ဒီစော်ကြီးကတော့ လင်ရှိ မိန်းမတယောက် ။ သူ့လင်ကြီးက အ ချိန်မရွေး ပြန်ရောက်ချလာနိုင်သည် ။ လိုလားတောင့်တနေတဲ့သူကို လုပ်ရတာတော့ ကောင်းသည် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က ကုတင်ဘေးနားက ဘီဒိုလေးပေါ်က အကောင်းစား ၀စ်စကီပုလင်းနဲ့ ဖန်ခွက်တွေဆီကို လျှောက်သွားလိုက်ပြီး ဖန်ခွက်နှစ် ခွက်ထဲကို ၀စ်စကီ လောင်းထည့်သည် ။ သူ့ဆီကို ပြန်လျှောက်လာပြီး ဖန်ခွက်တခွက်ကို ကမ်းပေးသည် ။ ၀စ်စကီ သောက်ရင်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ပေါ်ကို ရောက်လာသည် ။ “ မင်း ရွှေဖြူ့ကိုကော နဲနဲ စမ်းမကြည့်ဘူးလား…” “ မမ က ကျနော် အေးအေးဆေးဆေး နေနေတာကို မကြည့်ချင်ဘူးထင်တယ်…ဟင်းဟင်း..” “ ရွှေဖြူလဲ မမလိုဘဲ အဖိုးကြီး ယူထားတာ ..မမသိတာပေါ့ကွယ်..သူလည်း ဆာနေတယ် ဆိုတာ..” ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လက်က သူ့ပေါင်အလည်က ဖွားဖက်တော် လက်နက်ဆီကို ရောက်နေပြီ ။ ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေ ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်နေသည် ။ လက်နက်ကလည်း တအားကို ကြွနေပြီ ။
ဒေါ်အေမီသွင် ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ပစ်နေသည် ။ သူလဲ ကုတင်ဘေးမှာ ထရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ စိုပြေတောင့်တင်းတဲ့ ဖြူဝင်းပြီး ပစ္စည်းကောင်းတဲ့ မိန်းမချောကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးအလှအပတွေကို မြင် ရတဲ့အခါ သူ့စိတ်တွေ ထကြွသထက် ထကြွလာရသည် ။ မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော် ကို ဒေါ်အေမီသွင် သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး လက်နဲ့ ဖမ်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ “ တကယ့်ကို အားရစရာကြီးကွယ် ….မမလေ….လီးသေးပြီး မတောင်နိုင်တဲ့ မမရဲ့ လင်ကြီးနဲ့ ပေါင်းနေရ တာ တကယ့် လောက ငရဲဘဲ….အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေ များခဲ့ပြီလေ …ဒါကြောင့် မမလေ..မင်းကို အ ကူအညီ တောင်းရတာပေါ့…” ပြောနေရင်း ဒေါ်အေမီသွင်သည် လိင်တန်ကို ပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ်နေပါသည် ။ “ မင်းက လီးကြီးရုံမကဘူး..လိုးလဲ လိုးတတ်..လိုးနိုင်တယ်လေ ..မင်းနဲ့ တခါ ကြုံပြီးတဲ့နောက် မမလေ..မင်းကို စွဲသွားတယ်..မင်းကို တောင့်တမိတယ်..တမ်းတမိတယ်….ကွာ….” ဒေါ်အေမီသွင်သည် လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ဒစ်လုံးကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စနမ်းလိုက်ပြီး..အရင်းပိုင်းကနေ အဖျားပိုင်းထိ လျာနဲ့ ယက်လိုက်သည် ။ “ ဟင်း…ကြိုက်တယ်ကွာ….” ထိပ်ဖျားကို နှုတ်ခမ်းထူထူအိအိတွေနဲ့ ပြွတ်ကနဲ ငုံကာ စုတ်လိုက်ရင်း ပြောလိုက်တာပါ ။ သူကလည်း ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ နို့ထွားထွားကြီး နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ ကိုင်မိ၇သည် ။ နို့ကြီးတွေက နဲနဲ တွဲကျနေပေ မယ့် တင်းမာလုံးဝန်းပြီး ကိုင်ဆုပ်လို့ ကောင်းတုံးပါဘဲ…။ နို့သီးခေါင်းအညိုရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတလုံးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်တော့ မာတင်းနေတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ သည်အချိန်မှာ ဒေါ်အေမီသွင်သည် သူ့လိင်တန်ကို အားရပါးရဘဲ စုတ်နေပါပြီ ။ ရွှေရေး အစုတ်ကောင်းလှပြီ သူထင်တာ ဒေါ်အေမီသွင်က ပိုလို့ တော်နေသည် ။ စုတ်တာတွေ ကောင်း လွန်းလို့ တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရပြီး နုတ်ဖျားက တအီးအီး ညည်းမိရသည် ။လျာလေးနဲ့ ပတ်ခြာလှည့်ပြီး ကစားပေးတာ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲ ..။ သုတ်ရည်တွေ ပြွတ်ကနဲ ပန်းထွက်သွားခါနီးကို ဖြစ်သွားသည် ။ မနည်း စိတ်ထိန်းလိုက်ရသည် ။ မဖြစ်သေးပါဘူး..သူ့ကိုလည်း ကောင်းအောင် ပြန်လုပ်ပေးအုံးမှပါ…ဆိုပြီး ဒေါ်အေမီသွင်ကို စုတ်တာ ရပ်လိုက်ဖို့ သူပြောလိုက်သည် ။ “ ဘာလို့ ရပ်ခိုင်းတာလည်းဟင်…” “ မမ စုတ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ..ကျနော် ရပ်ခိုင်းရတာက မမကို ကျနော် ယက်ပေးချင်လို့ပါ.. မမကို ကျနော် မှုတ်ပေးပါရစေ …” “ ဟင့်အင်း…မယက်ပါနဲ့….ရတယ်..ရတယ်…..” “ လာပါမမရယ်….လှဲအိပ်လိုက် ..မမ ကို ကောင်းစေချင်တယ်…မမ တအား ကောင်းအောင် ကျနော် မှုတ်ပေးမယ် …” ဒေါ်အေမီသွင်က ပက်လက်လှဲချလိုက်တဲ့အခါ သူက ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကား လိုက်တဲ့အခါ ပေါင်ကြားက မိန်းမကိုယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ သူ့လိင်တန်က အစွမ်း ကုန် တင်းမာ ကြီးထွားလာတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပေါင်ကြားကို သူ့မျက်နှာ အပ်လိုက်ပြီး ထူထူအမ်းအမ်း နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေကို လျာအပြားလိုက်နဲ့ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပင့်တင်ကာ ယက်လိုက်တော့ ဒေါ်အေမီသွင်…“ အို..ဟိုဟို..အား…အ….” ဆိုပြီး တုန်ခါသွားပြီး သူမပေါင်တန်တွေကို စေ့ဖို့ ကြိုးစားတယ် ။
သို့ပေမယ့် သူက ပေါင်တန်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖြဲကားထားတာမို့ စေ့လို့မရဘူး ။ သူ့လျာက ဆက်တိုက်ဘဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖိဖိ ယက်ပေးနေပြီ ..။ “ အို….အား…ဟင်…အား…အ….အ……အင်ဟင်……အာ…အာ……” ဒေါ်အေမီသွင် သူ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ “ တော်..တော်ပြီ…အား…အမလေး..မမ..မမ….မခံနိုင်တော့ဘူး…..အီး….” ဒေါ်အေမီသွင် ဘယ်လောက် ရပ်ခိုင်းရပ်ခိုင်း သူက ဆက် ယက်တုံးဘဲ ..။ ဒေါ်အေမီသွင် တကိုယ်လုံး တုန်ခါ ခါးကော့ ခေါင်းရမ်းပြီး “ ပြီး ”သွားရတယ် ။ ဒီတော့မှ သူ ယက်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာကို ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကနေ ခွာလိုက်တယ် ။ “ မင်း..မင်း..အရမ်း လုပ်တတ်တာဘဲ ..” ဒေါ်အေမီသွင် ဆက်မပြောနိုင်တော့ဘူး ။ နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲတွေ အနားကို သူ့လိင်တန်ကြီး တေ့ပေးလိုက်လို့ ..။ ဒေါ်အေမီသွင် ဖမ်းငုံကာ စုတ်လိုက်လို့ ..။ သူ့လိင်တန်က ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ အပြည့်အသိပ်ကြီး ဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်း ယက်ပေးခဲ့လို့ တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူ့လိင်တန်ကို စေတနာ ပါပါနဲ့ စုတ်ပေးနေတယ် ။ လျာနဲ့ ကလိပေးလွန်းလို့ တချက်တချက် ဆတ်ဆတ်ခါသွားရတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ လကတဖက်က သူ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ချေနယ်ပေးနေတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင် စုတ်နေတဲ့အချိန် သူကလည်း လိင်တန်ကို နှုတ်ခမ်းထူထူတွေ အထဲကို ဖိဖိ ထိုးညှောင့်မိတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်က ဂွေးစိတွေကို ဆုပ်နယ်နေတဲ့ လက်ကို ဂွေးစိတွေ အောက်ဖက်ကို ပွတ်သပ် ကုတ်ခြစ်ပေးနေရင်း လိင်ချောင်းကို တအား စုတ်..သူကလည်း ထိုးညှောင့်တော့ မကြာခင်မှာဘဲ သူ့ တကိုယ်လုံးက အကြောအချင်တွေ အီဆိမ့်သွားအောင် ကောင်းလွန်းသွားပြီး သုတ်ရည်တွေ တဖျောဖျော ဒေါ်အေမီသွင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်မိရတယ် ။ ဒေါ်အေမီသွင်လည်း ပါးစပ်ထဲ ပြည့်လျှံသွားတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို တကွပ်ကွပ်နဲ့ မြိုချပစ်လိုက်တယ် ။ “ ကောင်းလားဟင်..မမ စုတ်ပေးတာ ….” “ အင်း..အရမ်း ကောင်းတာဘဲ …” ရေချိုးခန်းဆီကို လျှောက်သွားတဲ့ သူ့ကို ဒေါ်အေမီသွင်က “ မမကို တ၀ကြီး ချစ်ပေးရအုံးမှာနော် ….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ “ အင်း…ဒါပေါ့ မမ ..မမကို ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ ချစ်ပေးပြီးမှ ကျနော် ပြန်မှာ …။ တကယ်တော့ သူ ဒေါ်အေမီသွင်ကို ဒီလို လုပ်ပေးနေတာတွေက ဒေါ်ရွှေဖြူသန့်အတွက် ပါ ..။ ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ခိုင်းတာ ဆိုရင် သူ ဘာမဆို လုပ်ပေးမှာ လေ ..။
အလုပ်ပြောင်းရတဲ့အတွက် ရွှေန်းဘုံနဲ့ရော ရွှေရေးလွင်လွင်နဲ့ရော မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး ။ နေရာသစ် ဘော့စ်အသစ်နဲ့ အသားကျအောင် လုပ်ကိုင်နေရတယ် ။ နေရာသစ်က အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ေ၈ါက် အတူတူ ရိုက်ဖြစ်တယ် ။ အရင်တုံးက လူကြီးအိမ်မှာ တာဝန်ချထား ခံရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်ဘူး ။ အခုတော့ စနေ တနင်္ဂနွေ ဆိုရင် ဂေါက်ရိုက် တင်းနစ်ရိုက် နဲ့ ဟန်ကျနေတာ ..။ ဂေါက်ရိုက်ပြီး အပြန် ကိုးမိုင်ဖက်က ဆိုင်တဆိုင်မှာ တ၀ိုင်းစားဖို့ ချိန်းလိုက်ကြတယ် ။ စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ ရွှေရေးကို လူတယောက်နဲ့ ထိုင်စားနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ရွှေရေးက လှမ်းခေါ်လို့ သူ သူတို့ စားပွဲကို လျှောက်သွားလိုက်တယ် ။ ရွှေရေးက သူနဲ့ အတူတူ ထိုင်နေတဲ့ လူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ သူ့လိုဘဲ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ ကိုဇော်ဝိတ်..သူ့ကို အမြဲ ဂရုစိုက်တယ်..သူ့မိဘတွေကလည်း ကိုဇော်ဝိတ်နဲ့ သဘောတူနေတယ် လို့ ပြောပြ မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။ ကိုဇော်ဝိတ် ဆိုတဲ့ လူကလည်း သဘောကောင်းပုံရပါတယ် ။ ရွှေရေးကတော့ သူနဲ့ အသွင်တူတဲ့ လူကို ရှာသွားပြီ ။ ကိုယ့်စော် တခြား လူ လက်ထဲ ရောက်သွားတာကို စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ် မကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူကကို အချိန်မှ မပေးနိုင်ဘဲလေ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွှေရေးအတွက် သူ ၀မ်းသာပါတယ် ။ ဒီနေ့ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ခါနီး ဒေါ်ရွှေဖြူသန့် ဖုန်းဆက်တယ် ။ သတိရတဲ့အကြောင်း..အားရင် အိမ်လာခဲ့ပါအုံး …ပြောတယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုးပြီးခါစမှာဘဲ ဖုန်းလာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ရွှေနန်းဘုံ ဖြစ်နေတယ် ။ ရွှေနန်းက “ ရာထူးတိုးလို့ ဘ၀င်မြင့်နေပြီလား..ဆရာကြီး..” လို့ စတယ် ။ နောက်တယ် ။ “ ရွှေနန်းကို မတွေ့ချင်တော့ဘူးလား..သတိမရဘူးလား..” လို့ မေးတယ် ။ “ တွေ့ချင်ပါတယ်..ရွှေနန်းရယ် …ရွှေနန်း အတွက် ဆိုရင် ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးမယ့်လူပါ..တခုခု ခိုင်းစရာ ရှိရင် ခေါ်သာ ခေါ်လိုက်” လို့ ပြောလိုက်တော့ “ အခု ခိုင်းမယ်..လာမလား..” လို့ တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်မောပြီး ပြောတယ် ။ လာမယ်လေ..ဘယ်ကို လာရမလဲ ” လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့ မြို့သစ်က တိုက် ပြီးသွားပြီ..အခုတော့ ဆရာအေးကျော် ( သူတို့ အိမ်မှာ ဘာဘာညာညာ လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ လူ )ကို အစောင့်အဖြစ် ထားထားတယ် …အဲဒီကို လာခဲ့မလား…” လို့ မေးတယ် ။ “ လာခဲ့မယ်..” လို့ ပြောပြီး ရွှေနန်း နဲ့ ချိန်းထားတဲ့ မြို့သစ်က တိုက်သစ် ဆီကို သူ သွားလိုက်တယ် ။
ရွှေနန်း တယောက်ထဲ စောင့်နေတယ် ။ အက်စကော့ လိုက်တဲ့လူ တကောင်တမြည်းမှ မတွေ့ဘူး ။ တိုက်ကို စောင့်ပေးတဲ့ ဆရာအေးကျော်လည်း မတွေ့ဘူး ။ ရွှေနန်း အားလုံးကို ဖယ်ရှားထားပုံ ရတယ် ။ တိုက်အပေါ်ထပ်ကို လိုက်ပြတယ် ။ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် ။ “ ရှင်ဘုရင့်ပုဆိုး ပိုးချည်း ” ဆိုသလိုပေါ့ ။ လူကြီး ဆောက်တဲ့ တိုက်ဆိုတော့လည်း သစ် အကောင်းစားတွေ ပေါပေါများ များ သုံးထားတာကိုး ။ ကျွန်းသား အကွက်လှလှနဲ့ နံရံတွေက လှမှလှ ..။ “ ကောင်းလား …” “ အင်း..အရမ်းကောင်းတာဘဲ…” သူက ရွှေနန်းရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က တင်ပါးစွင့်စွင့်ကားကားတွေကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာ ..။ “ အိုး..ဘာကြည့်နေတာလဲ..သူနော်…” “ တကယ်ဘဲ ရွှေနန်းကို သတိရပါတယ် …” “ ဘာလို့ ဖုန်း မဆက်တာလဲလို့..” “ ကြောက်လို့..စိတ်ဆိုးမှာ စိုးလို့..” “ အံမာ..အပိုတွေ…ခိခိ …တကယ်ကြောက်လား ….” “ အင်း..” “ ခိုင်းတာ လုပ်မလား..” “ အင်း လုပ်မယ်..ခိုင်းလေ ….” သူ့နားနားကို နှုတ်ခမ်းလေး တိုးကပ်ပြီး..တိုးတိုးလေး..“ ချစ်ပေး..” လို့ ပြောပါတယ် ။ ကြက်သီးတွေ ထပြီး ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် က ၀ုန်းကနဲ နိုးကြား လာရတယ် ။ “ အင်း..ဘယ်အခန်းသွားကြမလဲ…” “ လာ…လာ…” ရွှေနန်းက အိပ်ခန်းတခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ် …။ ဒီ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကုတင်အသစ်တလုံးနဲ့ အိပ်ရာခင်းအဖြူရောင် ခင်းထားတဲ့ ရေမြုပ်မွေ့ရာကြီးကို ခင်းကျင်းထားတာ တွေ့ရတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲကို လှမ်း ၀င်လိုက်ချိန်မှာဘဲ သူ့ ဒုတ်က အရမ်းကို မာကျောတောင်မတ်လာတယ် ..။ ရွှေနန်းက သူ့ကို သိုင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စ စုတ်လိုက်တယ် ။ သူ့လက်တွေက ခါးကို ဖက်ထားတာကို ရွှေနန်းက သူ့လက်တွေနဲ့ ဆွဲဖြုတ်ပြီး တင်ပါးတွေဆီကို ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ စွင့်အားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ်တော့ အောက်မှာ ဘာမှ ခံ ၀တ်မထားဘူး ဆိုတာ သိလိုက်တယ် ။ စိတ်ရိုင်းတွေက မွှန်ထွန် ပြင်းထန်လွန်းလို့ ဘာကိုမှ မသိတော့ဘူး ။ ရွှေနန်းကို ဖြုတ်ဖို့ တခုဘဲ သိတော့တယ် ..။
ရွှေနန်းကလည်း သူ့ပေါင်ကြားနေရာကို လက်ကလေးနဲ့ စမ်းလိုက်တယ် ။ နှုတ်ခမ်းချင်းအကွာ..“ ဟင်း..တောင်နေပြီ..” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောတယ် ..။ ရွှေနန်း ဒုတ်ကို ကောင်းကောင်း ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်တယ် ..။ ပြိုင်တူလို ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ပစ်ကြတယ် ။ ရွှေနန်း ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတာနဲ့ လုံးဝန်းတင်းမာတဲ့ ရင်စိုင်တွေကို သူ အငမ်းမရဘဲ စို့ပစ်မိတယ် ။ ဆုပ်နယ်မိတယ် ။ ရွှေနန်း အချိုးအဆက်က တအား မိုက်နေတယ် ။ ရင်သားစိုင်တွေက တင်းမာ ကော့ထောင်နေ ကြတယ် ။ မတွေ့ကြတာ ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်က ပို ကြည့်ကောင်းလာသလိုဘဲ ။ စွင့်ကားတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကိုလည်း အားရပါးရကို နယ်ပစ်တယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး မတွေ့တာ မလုပ်တာ ကြာလို့ အရမ်းကို အငမ်းမရ ဖြစ်နေကြတယ် ။ ရွှေနန်းကလည်း သူ့လိင်တန်ကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ပွတ်တိုက်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်ကို လဲကျသွားကြတယ် ။ သူကေ၇ွှနန်းကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် ။ ရင်စိုင်တဖက်က ရင်သီးမာမာလေးကို ငုံဟတ်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့လိုက်ရင်း ပေါင်တန်တွေကို လက်နဲ့ ဘေးကို တွန်းပို့လိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်နဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို တေ့လိုက်တယ် ။ စိုစွတ်နူးညံ့တဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးနဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူး ထိတွေ့လိုက်တော့ စိတ်တွေက ထိန်းမရအောင် ထကြွ သွားရတယ် ။ရွှေနန်းက သူ့လက်မောင်းတွေကို တအား ဆုပ်ကိုင်ထားတယ် ။ လိင်တန်ကို ဖိသွင်းလိုက်တော့ တထစ်ထစ်နဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို တိုးဝင်သွားတယ် ။ ရွှေနန်းလည်း “ အိုး…..အီး….” လို့ ညည်းငြူလိုက်ပြီး ခါးလေးကော့သွားတယ် ။ သူ့လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ရွှေနန်းရဲ့ လက်က လက်သဲတွေက သူ့လက်မောင်းသားထဲကို စူးနစ်ဝင်သွားတာကိုလည်း ခံစားလိုက်ရတယ် ။ သူ့လိင်တန်ကို အဆုံးထိရောက်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ သူ့လိင်တန်တခုလုံး ရွှေနန်းရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ ရောက်နေပြီ ။ ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တော့ ရွှေနန်း တဟင်းဟင်း နဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်ခါလာတယ် ။ ရွှေနန်းရဲ့ ရင်စိုင်တွေကို ဆုပ်နယ်ပေးရင်း ဖင်ကို ကော့ပြီး သူလုပ်တော့ ရွှေနန်း တအားကြိုက်ပြီး အောက်ကနေ ပြန် တုန့်ပြန်တော့တာဘဲ ..။ ရွှေနန်းဟာ တော်တော် အောက်ပေးကောင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ဘဲလို့ မှတ်ချက်ချမိတယ် ။ ရွှေနန်းကိုယ် အောက်ပိုင်းကို မွှေ့ရမ်းပေးလိုက် ကော့ပင့်ပေးလိုက် လုပ်တော့ အရမ်းကောင်းလွန်းလာလို့ ပြီးခါနီး ဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ် ။ ဒီလို မွှေ့ရမ်း ကော့ပင့်ပေးနေတော့ ရင်စိုင်ကြီးတွေက တုန်ခါ လှုပ်နေကြတယ် ။ ရွှေနန်းက “ နို့တွေကို ကိုင်ပေး…” လို့ ပြောလို့ သူ့ရင်သားစိုင် တဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ပေးတယ် ။ တော်တော်လေး ကြာအောင် ဆောင့်ပေးအပြီး ရွှေနန်းက “ ပုံစံ ပြောင်းရအောင်..” လို့ ပြောလို့ ဆောင့်ပေးနေတာတွေကို ရပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ရွှေနန်းက ပါးစပ်က ဘာမှ မပြောပေမယ့် လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။
တင်ပါးဖြူဖြူကြီးတွေရဲ့ အနောက်ကို သူ နေရာ ၀င်ယူလိုက်တယ် ။ စအိုပေါက် နီညိုညိုလေးရဲ့ အောက်က အင်္ဂါစပ်ကြီးက နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေနဲ့ အရေတွေ စိုပြောင်လို့ ပြေး ယက်ချင်စ၇ာ တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့လိင်တန်နဲ့ ထိုးသွင်း စပ်ယှက်ရမယ့်အစား ကုန်းပြီး လျာနဲ့ ယက်ပစ်လိုက်မိတယ် ။ “ အို့…မယက်နဲ့တော့လေ ..အကို…လိုး…လိုးပါ…..ရွှေနန်း လိုချင်လှပြီ…..” “ စိတ်ချ..စိတ်ချ…..အကို လိုးမှာ…..ကောင်းကောင်းကို လိုးပေးမယ် .” အင်္ဂါစပ်ကြီး အ၀မှာ လိင်တန်ကို တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တယ် ..။ “ အို့…အမေ့…ဖြေးဖြေး…..” တချက်ချင်း မှန်မှန်လေး အသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်တယ် ။ ရွှေနန်း ဖင်ကြီး ထောင်ပေးပြီး မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားတယ် ။ ရွှေနန်း အင်္ဂါစပ်ထဲကို သူ့လိင်တန် တစွပ်စွပ် တဖတ်ဖတ်နဲ့ ၀င်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် ဖြစ်နေတာကို သူ တွေ့နေရတယ် ။ လိင်တန်ကတင် အရသာ ရှိနေတာ မဟုတ်ဘဲ ဒါကို မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းကလည်း အရသာ ရှိနေတယ် ။ “ အင်းဟင်း..အင်းဟင်း……..အင်း……အင်း……..” ရွှေနန်း ရဲ့ ခါးသိမ်လေးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး အားနဲ့ ဆောင့်ပေးနေတယ် ။ စိုစိုစီးစီး ကြပ်တည်းတဲ့ အ င်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲ ထိုးဆောင့်နေတာတွေက တစွပ်စွပ် တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ညံလာတယ် ။ “ အား….အမလေး…ဆောင့်..ဆောင့်…ဆောင့်……တအား…တအား…..ဆောင့်…ဟိ…အား…..ဟင့်….. ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်…..ဆောင့်…..ဆောင့်…..” သူဆောင့်လိုက်တိုင်း ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တုန်ခါသွားတယ် ။ အသားချင်း ထိရိုက်သံတွေကလည်း တဖတ်ဖတ် နဲ့ ထွက်ပေါ်နေတယ် ရွှေနန်းရဲ့ တင်ပါးသား ဖွေးဖွေးကြီး တွေကို ကြည့်ရင်း ဖီးတေ အရမ်းတက်လာပီး မထိန်းနိင်တော့ဘဲ အချက် ၄၀လောက် ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့်ရင်း လရည်ဖြူ ပျစ်ပျစ်များကို ရွှေနန်းအဖုတ်ကျဉ်လေးထဲသို့ စိမ်းသွင်းရင်း ဘာနဲ့မှ နိင်းလို့မရတဲ့ ကာမ အရသာကို ခံစား ရလေးတော့သည် ရွှေနန်းလည်း တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ခါကာ လက်များက ဖိပီး ဆုပ်ကိုင်လျက် ကာမအရသာကို ခံစားနေလေတော့သည်…..ပြီးပါပီ